Sumcada sawirka: Rich Ryan, waxaa iska leh Tiyaatarka Mu
Istaraatiijiyadda barnaamijka Fanka & Dhaqanka ee McKnight waa in la maalgeliyo ururada, barnaamijyada, iyo mashaariicda taas siiyaan qaabab taageero farshaxan -yahannada shaqeeya iyo kuwa dhaqan -dhaqameedka ah si ay u horumariyaan una wadaagaan shaqadooda, una hoggaamiyaan dhaqdhaqaaqyada iyo bulshooyinka. Tan waxaa ka mid ah fannaaniinta iyo dhaqan -yaqaannada ka shaqeeya hawlo ballaadhan oo isdaba -joog ah iyo habab kala duwan oo ku saabsan maaddooyinka iyo beeraha. Istaraatiijiyadeena waxay isticmaashaa qaab dhismeedka taageerada oo ah aalad lagu hago deeq -lacageedkayaga, oo lagu raadinayo in lagu maalgeliyo ururrada bixiya taageero kala duwan fannaaniinta iyo dadka dhaqanka haya.
Waxaan aqoonsannahay in farshaxan -yahannada iyo dadka dhaqan -dhaqameedka ahi ay si isa soo taraysa ugu tababaraan habab kala duwan iyo is -goysyada iyo in dhammaan fannaaniinta iyo dadka dhaqanku aanay si siman uga faa'iidaysan khayraadka jira. Markaan la jaanqaadno oo aan horumarineyno habkeenna, waxaan sii wadi doonnaa inaan maalgelinno taageerooyinka looga baahan yahay dhammaan fannaaniinta iyo dadka dhaqan -dhaqameedka ah inay barwaaqoobaan oo hoggaamiyaan, taasoo dhalisay mala -awaalkayaga wadajirka ah iyo kobcinta tayada nolosheenna.
Barnaamijka Farshaxanka & Dhaqanka wuxuu sii wadi doonaa inuu maalgashado ururada bixiya qaababka taageerada muhiimka ah ee fanaaniinta shaqeeya iyo dadka dhaqanku u aqoonsadaan inay muhiim u yihiin horumarkooda. Waxaan sidoo kale mudnaan siinnaa kaalmada hay'adaha shaqadoodu wax ka qabato mid ama in ka badan oo ka mid ah aagagga maalgelinta:
Kobci iskaashiyo istiraatiiji ah oo taageero toos ah siiya farshaxan -yahannada iyo dhaqan -yaqaannada.
Kobci oo joogtee joogitaanka iyo muuqashada fanaaniinta iyo hay'adaha dhaqanka ee aan la magacaabin oo ay ku jiraan kuwa ku nool miyiga, Qowmiyadaha, iyo Minnesota oo dhan, iyo kuwa Madow, Asaliga, Aasiya, Latinx, iyo kooxaha kale ee aan si fiican loo soo bandhigin.
Taageer fannaaniinta shaqeeya iyo kuwa dhaqanka qaada ee hormarinaya caddaaladda.
Astaanta Sawirka: Bruce Bruce Silcox, waxaa iska leh Tiyaatarka Guriga Pillsbury
Kobci iskaashiyo si loo taageero farshaxan -yahannada iyo dhaqan -yaqaannada
Waxaan la shaqeynaa wada -hawlgalayaal aan macaash doon ahayn oo dib ugu soo celiya doolarka McKnight dookhyada farshaxanka iyo dhaqan -yaqaannada. Waxaan sidoo kale maalgelinnaa ururada adeegga farshaxanka kuwaas oo bixiya qaabab taageero farshaxan -yahannada. Waxaan maalgelinnaa ururada taageera fanaaniinta oo xiriir qoto dheer la leh fanaaniinta iyo dadka dhaqanka haya waxaana siinaa ilo la heli karo. Markaan sidaa yeelno, waxaan awood u siineynaa fannaaniinta inay galaan qaababka taageerada ee ay u aqoonsadeen inay ugu muhiimsan yihiin fannaaniinta shaqeeya maanta.
Waxaan si firfircoon u aqoonsannaa la -hawlgalayaasheena dib -u -diiwaangelinta, oo ay ku jiraan kuwayaga wada -hawlgalayaasha barnaamijka wehelnimada iyo Golaha Degaannada Gobolka, oo kala shaqee si ay deeqo u siiyaan farshaxan -yahannada iyo dhaqan -yaqaannada.
Astaanta Sawirka: Ivy Vainio, waxaa iska leh Ururka Guryeynta Bulshada Hindida Mareykanka
In la horumariyo lana joogteeyo fanaaniinta aan sida weyn wax loogu sheegin iyo hay'adaha dhaqanka ee juqraafi ahaan
Waxaan hiigsaneynaa inaan horumarinno oo joogteeyo joogitaanka iyo muuqaalka fanaaniinta iyo dhaqan -dhaqameedka kala duwan ee dhaqanka iyo dhaqanka, oo ay ku jiraan kuwa ku nool miyiga, Qowmiyadaha, iyo guud ahaan Minnesota -ta Weyn. Fanaaniinta Madow, Asaliga ah, Aasiya, iyo Laatiinka iyo dadka dhaqanka leh ee ku kala nool juqraafiyo kala duwan ayaa gacan ka geysta gobolkayaga siyaalo muhiim ah, in kasta oo kheyraadka taariikh ahaan xaddidan iyo durdurrada maalgelinta. Iyada oo ay jiraan taageero macno leh, fannaaniintaan iyo hay'adaha dhaqanka, oo muddo dheer la kulmay caqabado ku aaddan jiritaankooda iyo jiritaankooda, ayaa kobci kara oo si buuxda u adeegsan kara awooddooda dhaqan. Sidoo kale, fannaaniinta miyiga iyo ururrada farshaxanka ayaa soo jiidan kara ilo badan oo taageero maaliyadeed ah, fursado ka dhaliya joqraafiga iyo tirakoobka dadka deegaanka, oo si buuxda u adeegsada awooddooda dhaqan. McKnight wuxuu taageeraa nidaamka deegaanka ee farshaxanka kaas oo dhammaan fannaaniinta iyo hay'adaha dhaqanku ay haystaan aalado ay ku barwaaqoobaan kuna hoggaamiyaan — hab -nololeedka oo ka faa'iideysanaya dhammaan reer Minnesota una suurtageliya bulshada fanka inay la kulmaan xilligan rajo iyo dhiirranaan.
Astaanta Sawirka: Bruce Bruce Silcox, waxaa iska leh Pangea World Theatre
Taageer fannaaniinta shaqeeya iyo kuwa dhaqanka qaada ee hormarinaya caddaaladda
Farshaxanleyda iyo dhaqan -dhaqeyaasha ayaa ah kuwa wax ka beddelaya isbeddelka iyo hoggaamiyeyaasha muhiimka u ah dhaqdhaqaaqyada lagu hormarinayo caddaaladda bulshada, midabka, dhaqaalaha, iyo deegaanka ee Minnesota. Farshaxanka iyo kuwa dhaqan -dhaqameedka ayaa naga caawiya inaan milicsanno, naqdinno, oo kobcinno fahamkeenna dhacdooyinka hadda jira, iyo ka -hortagga iyo beddelidda nidaamyada heerarkooda aasaasiga ah.
Hal qaab oo aan u isticmaalno si aan u fahamno doorka fannaaniinta ee horumarinta caddaaladda waxaa bixiya Dr. Maria Rosario Jackson, oo qoray in fannaaniintu ay naga caawiyaan dib -u -habaynta arrimaha murugsan iyo furitaanka fursadaha cusub. Waxay naga caawiyaan inaan dib u dhisno oo aan mar kale dhisno. Waxayna naga caawiyaan inaan dib u helno dadnimadeenna aan wadaagno, oo aan bogsano oo hagaajino waxyeelooyinkii hore iyo kuwa socda.
Deeq -bixiyeyaasha Farshaxanka & Dhaqanka ee McKnight waxay sameeyaan waxyaabaha soo socda:
In la taageero oo la hormariyo dhaqamada kala duwan ee fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo kuwa dhaqanka haya
U saamax fursadaha horumarineed iyo hoggaamineed ee u gaarka ah fannaaniinta iyo dhaqan -yaqaannada
In la fududeeyo xiriirka macnaha leh ee u dhexeeya fannaaniinta, dhaqan -dhaqameedka, iyo bulshooyinkooda
Muuji faham qoto dheer oo ku saabsan beertooda
Ka shaqee sidii loo tirtiri lahaa caqabadaha bulshada, dhaqaalaha, iyo isirka ee qotada dheer
Kaalmaynteena waxaa haga mabaadi’da barnaamijkeena, cilmi baaris ku saabsan qaababka taageerada farshaxanka, iyo gaaritaanka hadafka Aasaaska, kaas oo mudnaanta siinaya horumarinta natiijooyin siman oo waara oo loogu talagalay dadka iyo meeraha.
Xogta ka hooseysa shaqadayada farshaxanka waxay ka timaadaa warbixin taariikhi ah oo la yiraahdo Maalgashiga Wax-soosaarista: Daraasadda qaab-dhismeedka Taageerada loogu talagalay Fanka Maraykanka (Machadka Magaalada, 2006).
Warbixintu waxay daaha ka rogtay in bulshadu ay hoos u dhigto kaalmadii fannaaniinta ay u fidin jireen bulshooyinka. In kasta oo 96% oo ka mid ah dadka la daraaseeyay ay sheegeen inay “aad u dhiirigeliyeen oo ay dhaqaajiyeen noocyo farshaxan oo kala duwan,” kaliya 27% ayaa sheegay in “fannaaniintu wax badan ku biiriyaan wanaagga bulshada.”
Waxaan u isticmaalnaa qaabka qaab -dhismeedka taageerada sidii aalad lagu hago deeq -lacageedkayaga, annagoo raadineyno inaan maalgelinno ururrada bixiya noocyo badan ama dhammaan noocyada taageerada fanaaniinta iyo dadka dhaqan -dhaqameedka ah:
Tababbarka iyo horumarinta xirfadeed: Fursadaha barashada caadiga ah iyo noloshaba
Ansixinta iyo u doodista: In la qiimeeyo qiimaha waxa farshaxan -yahannada iyo dadka dhaqanku ay qabtaan iyo wacyi -gelinta dadweynaha wax -ku -biirintooda
Dalabka iyo suuqyada: Suuqyada u turjumaya rabitaanka bulshada ee farshaxanka magdhow lacageed
Taageerada maaddada: Helitaanka ilaha dhaqaale iyo jireed ee farshaxan -yahannada iyo dadka dhaqanku u baahan yihiin shaqadooda - sida shaqaalaynta, caymiska iyo faa'iidooyinka la midka ah, abaalmarinnada, boos, qalab, iyo agab
Shabakadaha iyo bulshada: Xiriirinta fannaaniinta kale iyo kuwa dhaqan -dhaqameedka ah ee ku jira waaxda dhaqanka iyo xiriirada dibadda ee bulshada ballaaran
Macluumaad: Ilaha xogta ee ku saabsan fannaaniinta iyo dhaqan -yaqaannada
La jaan qaadaya McKnight's Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, hawlgalka, iyo ballanqaadka Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka Qaybqaadashada, waxaan ku xidhnaa barnaamijkeena Farshaxanka & Dhaqanka mabaadi'da soo socota:
Dhawaansho: Waxaan ognahay in dadka sida aadka ah wax u saameeyay ay yihiin kuwa ugu habboon in la aqoonsado mudnaanta iyo xalka bulshooyinkooda. Farshaxanleyda iyo kuwa dhaqan -dhaqameedka ka soo jeeda bulshooyinka dhaqanka iyo juqraafiga gaarka ah ayaa ugu habboon in laga caawiyo in la qiyaaso mustaqbalka, loo sheego sheekooyinka, laguna bogsiiyo nabarrada bulshooyinkooda.
Sinaanta & Dhaqanka: Waxaan si cad u sheegnaa, in kasta oo aanan si gaar ah u ahayn, waxaan maalgelinnaa Madowga, Dadka Asaliga ah, iyo dadka kale ee fannaaniinta midabka leh, dhaqan -yaqaannada, iyo hay'adaha oo qayb ka ah faylal kala duwan oo ay ku jiraan fannaaniinta iyo hay'adaha caddaanka ah.
Gobolka oo dhan: Waxaan la hawlgalnaa la -hawlgalayaasha dhammaan magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee Minnesota. In kasta oo aanan maalgelin karin qayb kasta oo ka mid ah gobolka, haddana waxaan hiigsaneynaa inaan sii xoojinno joogitaankeenna Greater Minnesota iyo ballanqaadkeenna fannaaniinta miyiga.
Wadashaqayn & Iskutallaab: Waxaan aqoonsannahay ahmiyadda ay leedahay in lala shaqeeyo jilayaal kale oo awood leh nidaamka oo dhan si loo koro oo loo xoojiyo saameynta aan ku leenahay iyo taageeridda fanaaniinta Minnesota iyo dadka dhaqankooda wada.
Helitaanka Natiijooyin Loo Siman Yahay Dhammaan
Sinnaanta jinsiyadu waxay abuurtaa Minnesota oo aad ugu muhimsan uguna firfircoon fursadaha madaniga, dhaqanka iyo dhaqaalaha. Minnesota waxay horumartaa marka fannaaniinteeda iyo dadka xambaarsan dhaqanka ay kobcaan. Waxaan ognahay in dhammaan reer Minnesota ay ka faa'iideystaan markaan raacno oo aan hormarino caddaaladda jinsiyadda. Waxaan si ulakac ah u xaqiijineynaa, qiimeyneynaa, oo ku hoggaamineynaa muraayadda caddaaladda jinsiyadda. Aasaaska waxaa ka go'an sinnaanta iyo joogtaynta wax kasta oo aan qabanno, waxaanan aqoonsannaa muhiimadda is -goysyada iyo saldhigyada kale ee sinnaan -la'aanta sida dakhliga, jinsiga, juqraafiga.